Dayib Erduqaan oo kabaha la dulmaray khiyaanada Carabta - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Dayib Erduqaan oo kabaha la dulmaray khiyaanada Carabta
Madaxweynaha Turkiga Rajab Erduqaan ayaa kabaha la dulmaray khiyaanada Carabtu ku sameeyeen una iibsadeen Qudus. Rajab Erduqaan oo ka hadlaayay qorshaha xagjir Taram la damacsan yahay Qudus ayuu kabaha la dulmaray Carabta hambada Kadaba cunta Taram.
“Khiyaano weyn ayay Ka galeen Qudus, dadka Ku hoos nool iyo tan ugu muhiimsan Bani aadamka oo dhan ayuu yiri Dayib Erduqaan. Meel ku sheega wahaabiyada Sucuudiga waa aamusan yihiin, waxaad is weydiin kartaa goorta ay afka furan doonaan.
Iskaba dhaaf ayuu yiri Urdun, Baxrayn iyo Imaaraadka waxay la mid yihiin Sucuudiga. Qudus oo Yuhuuda faraha looga qaado khiyaano ka weyn ma jirto. Qiimo Yuhuudu kuma laha dhinacayaga ayuu raaciyay.
Hadalka Dayib Erduqaan ayaa imaanaya xilli xagjir Taram oo Yuhuuda siiya waxkasta oo ay isku difaacaan in ay si buuxda u leeyihiin dhulkii Carabta ay ka qabsadeen ayagoo isticmaalayay hubkii Maraykanka oo ay ku jirto Qudus iyo buuraha Golan ee Suuriya.